Sidan ayey u shaqeysaa kormeeraha garaaca wadnaha ee Apple Watch | Wararka IPhone
Tani waa sida kormeeraha garaaca wadnaha ee Apple Watch u shaqeeyo
Miguel Hernández | | Apple Watch, Alaabada Apple
Apple Watch ayaa durba wadadeeda ku maraysa curcurka macaamiisha, dhawaan Apple waxay daabacday macluumaad cusub oo kusaabsan garaaca garaaca wadnaha, sidaan horeyba u ognahay, Apple Watch waxaa kujira dareemayaal kaa caawin doona inaad qalbigaaga ka ilaaliso, sidan waa sida wadnaha shuqullada heerka kormeerka ee Apple Watch, oo faahfaahsan waxaan kuugu sheegi doonnaa iPhone News.
Ogaanshaha xogtan garaaca wadnaha, Apple Watch wuxuu awood u leeyahay inuu si sax ah u cabbiro tirada kalooriyada uu qofku gubto maalin kasta. Intaas waxaa sii dheer, isticmaaluhu wuu hubin karaa garaaca wadnihiisa markasta oo uu doonayo waqtiga dhabta ah. Laakiin intaas ka dib, waxa aan maanta diiradda saari doonno waa teknoolojiyadda qalabka ee ka dambeysa dhammaan nidaamyadan. Sida ku cad dukumiintiga macluumaadka, Apple Watch waxay cabireysaa garaaca wadnaha 10-kii daqiiqaba mar waxaana xogtaan lagu keydiyaa arjiga caafimaadka ee iOS 8 si loogu dhex daro barnaamijyada kale ee naga caawinaya inaan qaab ahaan ku sii jirno ama aan xakameyno dhinaca caafimaadka.
Dareemka garaaca wadnaha ee Apple Watch wuxuu adeegsadaa waxa loo yaqaan 'photoplethysmography', tiknoolajiyaddan, in kasta oo ay adag tahay in lagu dhawaaqo, waxay ku saleysan tahay xaqiiqo aad u fudud, waxay soo saartaa ilays iftiin ah oo marka dhiigga ka muuqda (oo casaan ah) ogaan doona xaddiga dhiigga wareegaya wakhti kasta iyada oo kuxiran xoogga midabka cas. Marka wadnuhu garaaco, fal-celintani waxay noqon doontaa mid aad u kacsan, softiweerka la adeegsadayna wuxuu u heellan yahay inuu cabbiro inta u dhexeysa biligleyga sidaas darteedna loo xisaabiyo garaaca wadnaha Milicsigaan waxaa lagu sii daayaa nalalka LED-ka ee Apple ku leeyahay salka hoose.
Sida aaladaha kale ee akhriska garaaca wadnaha, shaqadani ma ahan mid hagaagsan, laakiin Apple waxay ka digeysaa sida aad u isticmaasho Apple Watch inay saameyn ku yeelan karto aqrintaada. Si loo bixiyo akhriska ugu saxsan ee suurtogalka ah, Apple waxay ku talineysaa in kooxda saacadda iyo kiiska si habboon loogu hagaajiyo maqaarka sida ka muuqata sawirka tijaabada ah. Dabcan, dhinacyada kale ee anatomy-ka aadanaha ayaa saameyn ku yeelan kara akhriska sidoo kale.
Intaas waxaa sii dheer, Apple waxaa ku jira liistada faahfaahinta walxaha loo isticmaalay soo saarida badeecadan iyo sidoo kale cilmi baarista loo sameeyay. Waxay hubiyaan in dhammaan walxaha ay u hoggaansamaan xeerarka jira, iyaga oo horumarinaya xitaa ka baxsan shuruudaha ay soo rogaan hay'adaha xakamaynta caafimaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Tani waa sida kormeeraha garaaca wadnaha ee Apple Watch u shaqeeyo
Apple Watch waxay qaadataa in ka badan iPhone si ay u daarto
Shimbiraha careysan ayaa dagaalamaya! shimbiraha careysan ee ciyaarta la dagaallamaya